Vanodanana Mahotera Makamuri
Luxury Yakavanzika Jacuzzi Suites
Bhuka izvozvi, kuda vol = vol
Wona Makamuri eJacuzzi >
Fletcher € 25 kukwidziridzwa 1, 2 of 3 kwaedza (kwenguva pfupi!)
25 HOTERI KUSANGANISIRA Kudya kwemangwanani kwe € 25
72 maawa ekubatsira pa 25 Fletcher mahotera chete 25 euro p.p.n.!
Zvakare, mushure mekugara zvakanaka kweusiku unogona kubatana nesu pakudya kwemangwanani kwakazara, kutanga kwakakwana kuzuva rako!
Wagadzirira kuzorora kwechinguva? Bhuka izvozvi iyi yemakwikwi chibvumirano chekusvika kwako kusvika Mbudzi, chiito chacho chakarurama 3 inoshanda kwemazuva!
• 1, 2 of 3 x kugara kwehusiku
• 1, 2 of 3 x yakawanda yemangwanani
• Mahara bhasikoro- uye nzira dzekufamba
• Mahara WiFi
tarisa & Bhuka izvozvi >
Kumusoro Yakatemerwa Makamuri Ehotera Ine Yakavanzika Jacuzzi
Fletcher Royal Jacuzzi Suite Dzimba North Holland mu 2021
✅ 2 Yemunhu Jacuzzi
>> Mamwe mashoko
Fletcher Whirlpool Deluxe Suite Wageningen Gelderland mu 2021
✅ Wona uye ...
Fletcher Jacuzzi Executive Terrace Suite Nijmegen Gelderland mu 2021
✅ Yakasarudzika Suite
Bath Imba yekugezera yehumambo
✅ Mubhedha wakakura wakapetwa
Bathroom Yakanakisa yekugezera ine jacuzzi
Kubva ku € 47.0 ...
✅ Rozi terata nechinangwa chemadunduru
✅ Imbwa inogamuchirwa
✅ Deluxe kaviri ...
Bed Kingsize mubhedha
Yakaratidzwa Jacuzzi Kamuri Deals
Aya anotevera akasarudzwa mahotera eFletcher ane jacuzzi ane makamuri ehotera uye masuti ane jacuzzi, whirlpool mumba kana chamupupuri.
Aya mahotera ari munzvimbo yakanaka uye kazhinji kune yepachena kupaka uye yemahara wifi inowanikwa.
Dzvanya pane chinongedzo cheimwe yehotera pazasi kuti uende kune yakasarudzika Fletcher Jacuzzi kana Whirlpool mukamuri inopa peji..
Iwe unobva waona mitengo pakarepo, kuwanikwa uye zvimwe info.
Makamuri eJacuzzi Gelderland
Makamuri eJacuzzi North Holland
Fletcher Hotera-Restaurant Koogerend.
Makamuri eJacuzzi North Brabant
Hotera-Restaurant Teugel Uden-Veghel
Fletcher Wellness-Hotera Trivium.
Makamuri eJacuzzi South Holland
Fletcher City Hotel Hague
Makamuri eJacuzzi Zeeland
Fletcher Zuiderduin Beach Hotera
Dzimba dzeJacuzzi Drenthe
Fletcher Hotera-Yekudyira De Zeegser Duinen
Makamuri eJacuzzi Utrecht
Fletcher Hotera-Restaurant Amersfoort
Makamuri eJacuzzi Limburg
Makamuri eJacuzzi Groningen
Fletcher Mhuri Hotera Paterswolde
Makamuri eJacuzzi Friesland
Dzemukati makamuri emahotera ane yega jacuzzi kubva kune yakakurumbira hotera cheni Fletcher.
Hotels.nl Makamuri eJacuzzi
Sarudzo yakanakisa yemakamuri ehotera inopa kubva Map.nl.
Inntel Jacuzzi Makamuri
van der Valk Makamuri eJacuzzi
Chakavanzika Hotera Deals?
Kana iwe uchitsvaga akanakisa zvinopihwa, matipi, hunyengeri uye kudzikisira zvakavanzika kumakamuri ehotera muNetherlands, ndapota shanyira yedu saiti saiti SecretHotelDeals.nl >>
Yakakosha Fletcher Jacuzzi Suites
Fletcher Hotels akasangana naJacuzzi, Hot Tub kana Whirlpool
Waizviziva here Fletcher Hotele zvakare uine yakasarudzika yakasarudzika akasiyana makamuri ehotera uye masuti ane kaviri jacuzzi mukamuri, bhabheri rakanaka kana mhepo inofadza?
Zorora pamwe chete nemi vaviri mune yako wega Wellness junior suite nejacuzzi mumba, mamwe masuti ane terra yakavanzika kana balcony ine maonero akanaka, unovimbiswa kugara unokosha husiku humwe.
Ihotera ine jacuzzi mukamuri rine zvivakwa zvepamusoro ndizvo chete zvekupedzisira mukuzorora mushure memavhiki ekushanda akabatikana.
Yedu Yakakurudzirwa Fletcher Jacuzzi Makamuri
Kana tinya bhatani pazasi uye woona zvese zvinopihwa kubva kuFletcher hotera nejacuzzi kana whirlpool.
Wona Fletcher Hotera >
Mahotera neSauna neJacuzzi Mukamuri
Yakavanzika Sauna naJacuzzi mukamuri: Yakadaro yemhando yepamusoro!
Enda nhanho imwe kumberi, uye bhuka sutu suite mune yakasarudzika hotera ine yakavanzika hombe jacuzzi uye yakavanzika sauna mumba mako kune inoshamisa hutano ruzivo pasina vausingazive.
Kune mamwe makamuri akanaka emahotera ane dziva rakavanzika uye hombe kutenderera jacuzzi.
Dhinda bhatani pazasi kuti uwane rumwe ruzivo uye zvinopihwa.
Tsvaga Sauna Rooms >
Pane yakakurumbira hotera cheni Van der Valk iwe unowana akawanda emahotera mahotera ane yakavanzika huru jacuzzi mukamuri, anodakadza bubble bath, sauna, hutano uye kunyangwe dziva rakavanzika mukamuri rako rine hombe rakatenderera jacuzzi.
Dzvanya pane bhatani pazasi uye utarise yakanakisa van der Valk inopa.
Wona vd Valk Makamuri >
Inntel Art Hotera Makamuri eJacuzzi
Iwo maInntel mahotera anozivikanwa nekunakisa kwavo kubhabhatidza bhati, whirlpool uye makamuri ejacuzzi.
Iyo yakanakisa bubble bath mukati 2021 Semuenzaniso, iwe hausi kuzochiwana pasina pa Inntel Art Hotel Eindhoven.
Dzvanya pane bhatani pazasi uye tsvaga iyi yakakosha hotera cheni ine yakanaka hotera makamuri nekutarisisa kune jacuzzi mumakamuri uye spa / nzvimbo dzehutano muhotera ine jacuzzi yeInntel.
Wona Inntel Hotels >
Manheru NeHot Tub
Iyo inodziya inopisa inopisa tubu mumba mako, uko imi vaviri munogona kunakirwa nemvura inodziya!
Idzi dzimba dzemahotera dzinowanikwa zvishoma muNetherlands.
Wona Hot Tub Rooms >
Maitiro ekuaboja Mukati-Kamuri Jacuzzi kuFletcher?
Kamuri NaJacuzzi Vhidhiyo Impression
Wakagadzirira kudanana kwevhiki kure??
Wobva wazvirega iwe uchibikwa muhotera jacuzzi kana hot hot tub mumba.
Hotera kazhinji dzinopawo dzakasiyana nzvimbo dzehutano, kuitira kuti iwe ugone zvakare kuzorora zvizere muhotera sauna kana yekugeza bhavhu panguva yekugara kwako kuhotera.
Buda nemumwe wako uye torai nguva yenyu pamwe nemumwe.
Rega iyo hotera iuye neayo yega jacuzzi mumba uye chikafu chinonaka mangwanani.
Dzimwe nguva panotova nehotera ine padziva rega mumba!
Nei uchibhuka Kamuri yeHotera ine Yakavanzika Jacuzzi?
Sarudza hotera iri pakati pezvakasikwa kwevhiki yekuzorora iri kure, kana bhuku hotera muguta rine chipatapata kuitira kuti ugone kuzorora mujacuzzi mushure mezuva rekutenga.
Uri kutsvaga imba yehotera ine jacuzzi?
Wobva wasvika kurudyi nzvimbo kuVan der Valk.
Mune mazhinji emahotera edu vane kamuri yakakosha ine jacuzzi.
Nakidzwa nehotera ine jacuzzi mukamuri nemutengo wakanaka, whirlpool kana bubble bath?
Bhuka kugara kwehusiku pano muvan van Valk hotera ine jacuzzi mukamuri >
HOTERI DZIMU ROOM JACUZZI? NDINGAWANEI KUDZIDZISA VAYA?
Uri kutsvaga hotera jacuzzi pagungwa kana muDe Veluwe??
Pane yedu webhusaiti zviri nyore kusefa pane zvaunofarira.
Nenzira iyi iwe unogona kuratidza kuti iwe unoda imba yehotera ine jacuzzi.
Kubva pane urwu ruzivo, chete mahotera ane-mukamuri jacuzzi kana whirlpool anoratidzwa.
Nenzira iyi iwe unobva wawana mufananidzo wakajeka wemakamuri anozadzisa zvaunoda, kunge imba yehotera yejacuzzi.
Zorora muhotera Une JACUZZI MUROMO
Nyuchi Van der Valk isu tinonzwisisa kuti zvakakosha sei kuzorora uye kuzorora.
Ndokusaka isu takagadzira yakasarudzika fomula yakaitwa muhotera dzese.
Geniet in uw eigen suite van een privé jacuzzi op kamer, of maak gratis gebruik van de luxe wellnessfaciliteiten zoals een whirlpool, duhwino, fitness of sauna.
Kutenda kuhukama hwedu hwakanaka nemazhinji makuru ezvekushanya nemakambani, isu tine sarudzo yakakura yemapakeji.
Semuenzaniso, zvakadii nezve kuzorora kwezuva ku spa?
Kana iwe unogona here kushanyira rine nhoroondo guta kana chivaraidzo paki?
Imwe neimwe hotera ine mapakeji akasiyana, saka unogona kunakidzwa kwese.
Wona Zvese vd Valk Deals >
BHUKU HOTEL ROOM NAJACUZZIA
Paunodzokera kuhotera kwedu nejacuzzi mukamuri mushure mekunakidzwa kwezuva kunze, unogona kutora chigaro wakananga muresitorendi yedu.
Mahotera edu ese ane nzvimbo yekudyira ine yakakura menyu, saka pane chimwe chinhu kune wese munhu.
Ehe unogona kudzokera kukamuri yako yehotera nejacuzzi mushure mekudya kwemanheru kuti uzorore mune yako yepamusoro suite.
Mune ino yepamusoro 10 isu takasarudza akanakisa emakamuri emahotera ane jacuzzi kana whirlpool mumba.
Aya ndiwo mafaro aunofarira pamwe chete newaunoda kana shamwari yepamwoyo(mukati) yemanheru ekuzorora ehusiku!
Isu tine yepamusoro 10 mahotera ane-mukamuri-jacuzzi akasarudzwa iwe.
Ehe saizvozvo pane yakakura zvikuru sarudzo yemahotera akasiyana ane jacuzzi.
Ramba uine ziso pane ino peji, sezvo isu tichizogara tichiwedzera mahotera nemasuti ane-mukamuri jacuzzi.
Iyo yakakosheswa kwazvo uye yakasarudzika 5 * Mainport Hotel muRotterdam inzvimbo inonakidza yekugara kwako kwoumbozha kweusiku.
Makamuri ehotera muMainport Hotel ane jacuzzi yakanaka mumba.
> Verenga zvimwe uye uone mitengo yacho & chinowanikwa
2. VAN DER VALK MIDDELBURG – HOT TUB & SAUNA MUROMO
Van der Valk mahotera ari echokwadi anozivikanwa nemhando yepamusoro masuti ane jacuzzi mukamuri.
Zo heeft Van der Valk ook een ‘wellness suite’ met bubbelbad, infrared sauna uye kaviri mvura yekugeza.
Iwe haungopedza husiku mune yakanaka dhizaini kamuri hotera, asi zvakare zorora mune yakakura yakakomberedza jacuzzi mumba mako.
> bekijk de prijzen & chinowanikwa
Iwo mahotera ane hotera yakanaka kana jacuzzi mukamuri. Zorora!
Iwe unosarudza iyo Africa Suite, iyo suite yeHollywood kana pamwe imwe yemamwe makamuri akanangana?
Van der Valk Emmen ine dzimba dzakanaka dzehotera dzine jacuzzi mukamuri kana whirlpool.
Grand Hotel de Draak ndiyo hotera yekare muNetherlands, asi pamwe zvakare imwe yemahotera akasununguka kwazvo munyika. De ‘Superior Suites’ zijn niet alleen mooi, asi zvakare une jacuzzi mumba.
10. HOTEL VILLA DE KLUGHTE – WIJK AAN ZEE – 2 VANHU JACUZZI MUROMO
Hotera Villa de Klughte ine nzvimbo yakanaka ine maonero pamusoro pemahombekombe kana madhimoni! Ose masutu nemakamuri epamusoro ane 2 munhu jacuzzi.
Chii chinonzi hotera ine yakavanzika jacuzzi?
Zvibvumidze iwe kubvumidzwa muhotera yerudo neyakavanzika jacuzzi.
Fungidzira, pakati pechando, iwe newaunoda musipo paweekend.
Iwe wakangotarisa mukati nekunze mubindu rakanaka, een heerlijk warme privéjacuzzi wacht op jou en je partner.
Mutengo weyakavanzika jacuzzi uri pakati pe € 79,00 mu € 704,00 pamberi pa 2 vanhu husiku humwe.
Hotera inopa emakamuri ane whirlpool
Ungada here imba yehotera ine jacuzzi panguva yekugara kwako kwenguva pfupi munyika yedu yakanaka?
Ipapo iwe uri munzvimbo chaiyo paHotelBubbelBad.nl!
Pane ino peji iwe unonyanya kuwana mahotera, mazhinji kana mamwe acho akashongedzerwa neyakavanzika jacuzzi.
Iko kushambidza kunoshamisa kwepamoyo uye chinwiwa muhotera yeDutch yesarudzo yako.
Muzviitiko zvakawanda, zvine chekuita neyemhando yepamusoro kamuri yehotera mu 3- kana 4-nyeredzi hotera munyika yako.
Nzvimbo zhinji dzinowanikwa kuchamhembe kwenyika, kwaunogona kurara nejacuzzi.
Uri kuenda kune yakakwana hutano ruzivo uye imba yehotera ine bubble bath haina kukwana iwe, ipapo ungangoda kupedza husiku mune yakajairwa hotera hotera.
Anokosha husiku hunogara mumakamuri epahotera emhando yepamusoro
Isu tinopedza husiku pasi peanokosha husiku hwekugara muhotera ine jacuzzi mukamuri.
Izvi zvinogoneka, semuenzaniso, mumatunhu eDrenthe, Overijssel, Groningen, Utrecht neLimburg.
Zvakadii nezveimba yepamusoro yehotera muhotera diki-Het Heerenhuys muRuinerwold muDrenthe, kana imba ine jacuzzi mbiri muGroningen Hotel Resort Landgoed Westerlee?
Almelo neLimburgs Vakazvarwa muOverijssel zvakare vane mahotera anovimbisa kufadza kwemaviri.
Saka iwe unoda kuenda nekukurumidza uye urikutsvaga imba yehotera ine jacuzzi, tarisa chipo chedu pamusoro uye nekukurumidza kushamisika mudiwa wako neiyi yakasarudzika fomu yekugara kwehusiku!
Iwe unoda here kunakidzwa nerudo rwepamusoro ruzivo kana urikutsvaga yakanyanya kudanana hotera yeakakosha kudanana chiitiko: Valentine kana makore akawanda kudaro emuchato?
Ipapo imba yehotera ine jacuzzi izano rakanaka!
Iwo makamuri ehotera ane jacuzzi anowanzo kuve emakamuri epamusoro emahotera muhotera.
Pamusoro peyakavanzika jacuzzi, aya akashongedzerwa nemubhedha wamambo uye fenicha yakasarudzika.
Muchidimbu, zvese zviripo zvekugara zvakanyanya kudanana. Pazasi pane iyo 13 makamuri akakurumbira ehotera ane jacuzzi muNetherlands.
Kutsvaga imba yehotera ine jacuzzi? Tinokurudzira mahotera akanakisa.
Zano! Hotel de Wageningse Berg inokurudzirwa zvikuru! Kana kuti zvakadii nezve imba yezororo ine jacuzzi? Inonaka uye yakawanda yekuvanzika.
Hotera Stadhouderlijkhof: 2 suites dzakasangana nejacuzzi
Iyo inozivikanwa uye yakasarudzika Hotera Stadhouderlijkhof iri pakati peLeeuwarden.
Iyi yaive imba yemuzana ramakore rechi18 yemhuri yehumambo, asi ikozvino kune vaenzi veimba yamambo. Maar de koninklijke allure is nog steeds overal zichtbaar, zowel in het restaurant, muchivanze chine nhoroondo pamwe netara uye nemakamuri ehotera ane fanicha. Nekuti iyo yaimbova imba yamambo haina zvishoma pane 2 masutu ane jacuzzi denderedzwa uye iwe unorara mune chaiyo mana-posita mubhedha! Yakakwana yevhiki yekudanana kure.
Zano! Bhuka imwe yeiyo 2 masutu ane akakomberedza jacuzzi kuburikidza neiyo webhusaiti yepamutemo yeFletcher Hotel Stadhouderlijkhof
Kurara mune Yakakwirira imba ine yakakura bhati.
Nyeredzi ina Fletcher Hotel Oss iri kero yakanaka zvinoshamisa iri padyo neDen Bosch.
Yakanaka yekutenga, maar ook natuurgebied De Maashorst is vlakbij.
Zano! Boek hier een superior suite met een luxe bad en regendouche via de officiële website van Fletcher Hotel Oss
Nyeredzi ina Hotel de Reehorst heeft alles onder één dak: een eigen theater, een restaurant, een gezellige bar en terras.
Hotel de Reehorst iri pakati pehunhu hwakanaka hweVeluwe! Zvakanaka!
Iwe unogona kuzorora mune super-deluxe suites, ese ane jacuzzi rakanaka.
Ndeipi imba yehotera ine jacuzzi suite yaunosarudza: yeNew York, yeVenice, kubva kuIbiza yeMillionaire suite?
Ndeipi yeiyo 9 masutu iwe aunosarudzawo, umbozha uye kudanana zvinovimbiswa.
Mangwanani-ngwanani unogona kunakidzwa neyakafaranuka buffet yemangwanani muRestaurant Miami. Ongororo paZoover yakanaka kwazvo!
Wona mitengo pano
Kupopota pane Wageningse Berg
Uri kutsvaga inoshamisa nzvimbo yakanaka pakati pe greenery, ipapo tinogona kukurudzira Hotel de Wageningse Berg, iri pa Wageningen Berg!
Ihotera ine dhizaini yakasarudzika uye nekuda kwenzvimbo yayo pamusoro peWageningse Berg iwe unozobatwa kune inoyevedza maonero pamusoro pemafashama neBetuwe..
Iwe unogona kurara zvakanaka mumakamuri epahotera emahotera ane jacuzzi, unogona kudya muresitorendi kana mubhurari.
Kana kuti zvakadii nezve Wellness Center ine Finnish sauna, Turkish bath uye Jacuzzi? Inonaka!
Zano! Bhuka suite yakasarudzika kuburikidza newebhusaiti yepamutemo yeHotel de Wageningse Berg
Inowanikwa zvakananga paGooimeer Fletcher Nautical Quarter.
Iyo dhizaini hunhu hweNautical Quarter.
Ihotera racho rinotaridzika kunge musha wekuredza kupfuura hotera! Zvivakwa zvakasiyana, yakavakwa munzvimbo yegungwa, pamwe chete kuumba hotera.
Muchivakwa chikuru uchawana nzvimbo yekudyira, terrace newaini yekutandarira.
Makamuri ehotera anogara muzvivakwa zvakasiyana.
Pane (nguva dzose) Makamuri, asi iwe unogona zvakare kusarudza Royal suite uine maonero.
Iyi suite ine yakasarudzika yakavhurika yekugezera iyo yakagadzirirwa hombe bubble bath, mibhedha yakasununguka uye maonero akanaka pamusoro pe 'Gooimeer.
Zano! Bhuka suite yakasarudzika kuburikidza newebhusaiti yepamutemo yeFletcher-Nautisch Kwartier
Zorora mumba makaita jacuzzi
Munzvimbo yakanyarara uye yakanaka mune yakanaka imba ine infrared sauna, choto uye 2-munhu jacuzzi?
Izvo zvinogoneka kana iwe ukagara paRelaxing mu de kona yekumashure ..
Iyi ipaki diki-ine dzimba shoma, iyo yakavakwa mune yakajairwa Achterhoek maitiro ane matsvuku uye machena machena.
Misha yakawanda inogona kubhadharwa, asi kana iwe uchitsvaga kudanana kugara kwevaviri, ipapo isu tinokurudzira iyo 2-munhu imba ine 2-munhu jacuzzi mune tenzi yekurara, sauna uye nzvimbo yemoto ine zvigaro zviviri zverudo!
Dzimwe dzimba zvakare dzine huni inopisa moto uye sauna.
Unoda kugadzikana zvakadii? Iyo infrared sauna, een open haard en een jacuzzi, allemaal op een rustige en aangename plek. Op naar Slow down in de Achterhoek.
Hier staat een kolossale jacuzzi (1.70 m diameter) pamberi chaipo pehwindo uye iwe une maonero akanaka pamusoro pechiteshi chemukati cheRotterdam.
Imba yekugezera ine yekugezera-yekugezera uye yega sauna inopedzisa ruzivo rwehutano mune ino kamuri yehotera ine jacuzzi.
Zano! Bustling pakati pemadunduru
Fletcher Boutique Hotel Duinoord inowanikwa mumatunduru eWassenaar uye chete 15 maminetsi kufamba kubva kumahombekombe.
Tora mweya wekufema uye ufambe uye wozogara pane imwe yemahombekombe emahombekombe.
Asi iwe unogona zvakare kushanyira hunhu pa la mapu yekudyira yeHotel Duinoord!
Zano! Boek een luxe bruidssuite via de officiële website van Fletcher Boutique Hotel Duinoord
Iwo epamusoro makamuri emahotera ane mibhedha yakasununguka uye yekugezera yakasarudzika ine hombe bubble bath.
Iko kukosha kwemari kwakanaka kwazvo. Kune isingasviki € 100, – kunt u al een hotelkamer met bubbelbad boeken. Iyi hotera inokurudzirwa kwazvo.
Inopenya mune yeChampagne suite
Unoda kupedza mazuva mashoma newaunoda?
Ipapo tinogona Van der Valk Breukelen kurudzira!
Pano iwe unowana akasiyana emhando yepamusoro masutu ane yekuwedzera yakavanzika inopisa tabhu.
Iyo champagne neJunior suite zvinokurudzirwa zvakanyanya!
Pamusoro pekugezera bubble, yemhando yepamusoro imba yehotera ine jacuzzi zvakare ine mvura yekunaya uye yakanaka teru.
Asi Van der Valk Breukelen ane zvimwe zvakawanda zvinoshamisa zvaakakuchengetera; unogona kushandisa zvimwe zvivakwa zvehutano muhotera mahara.
Zvakanaka kuziva Utrecht neAmsterdam zviri nyore kuwana.
Wona mitengo nemakamuri ehotera pano
Imba yepamusoro yehotera ine jacuzzi uye siringi yakavhenekerwa
Van der Valk Hotera Arnhem iri pedyo neArnhem uye iyo Veluwe iri zvakare padyo!
yakakura, hwoumbozha uye inonaka yakashongedzwa suite ine mubhedha wakasununguka uye imba yekugezera ine jacuzzi uye yakavhenekerwa siringi.
Als je de ‘Loft’ boekt, uchagamuchirwa nemabhuru pakusvika.
Wow! Imba yehotera ine yakakura jacuzzi
Maindasitiri, hunyanzvi uye hwakasiyana. Ndizvozvo Inntel Hotera Art muEindhoven, pamwe iri muchivako chikuru chefekitori yePhilips.
Kana iyo fekitori 1909 yakavakwa, hapana aigona kufungidzira kuti chivakwa ichi chaizoshanda seArt Hoteli anopfuura makore zana gare gare.
Architects uye vagadziri vakachinja hotera yese kuita basa rechokwadi rehunyanzvi.
Iwe unonzwa fekitori yekare, asi zvifungidzire iwe uri mune yemazuva ano uye yekuzorora yakasarudzika. Husiku hushoma pano hunovimbiswa kuve yakasarudzika chiitiko.
Zano! Imba yehotera ine jacuzzi nebhokisi
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven ndiyo inzvimbo yakanaka yevanoda zvisikwa uye avo vanotsvaga runyararo, asi Eindhoven zvakare ari pedyo.
Tsvaga zvakapoteredzwa zvisikwa zvisikwa, enda kuchovha uye kufamba nemunharaunda uye upedze masikati uchitenga muEindhoven.
Mushure meizvozvo zvinonakidza kuuya kumba kune yakasarudzika suite ine mambo-saizi mubhedha, flatscreen tv, redhiyo uye Nespresso muchina.
Imba yekugezera yakasarudzika inewo yekugezesa yakanaka uye yakakura jacuzzi pavheranda. Pano unogona kuputika murunyararo uye zvakavanzika zvachose!
Yakurudzirwa! Bhuka iyo yakasarudzika suite kuburikidza nepamutemo webhusaiti yeFletcher Jagershorst
Kunyangwe mamwe kero ane jacuzzi mukamuri yehotera?
Iwe unoda here kushandisa sauna uye jacuzzi murunyararo uye sauna pasina vamwe vanhu, ipapo Kero yehutano yakasarudzika isarudzo yakanakisa!
Pano unogara semurume nemukadzi uye zvakavanzika zvako zviripo 100% kuvimbiswa.
Iwo akanakisa madiki-madhiresi, kuti iwe unogona kuchengetedza kwemaawa mashoma, asi zvakare kusanganisira kugara kwehusiku.
Idzi kero dzakavanzika dzinogona kuwanikwa muNetherlands yose.
Wona Mamwe Makamuri eJacuzzi >